Fitsangatsanganana miaraka amin'ny ankizy any Eropa | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialan-tsasatra, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Manomboka any avaratra ka hatrany atsimo, dia toerana be soso-kevitra i Eoropa hivezivezy miaraka amin'ny ankizy satria mampifangaro ny fahafinaretana amin'ny fanabeazana, izay mety hampiala-voly be ho an'ny mpandeha kely. Raha iray amin'ireo olona mankafy hahafantatra tanàna vaovao sy mizara traikefa tsy manam-petra amin'ny maha-fianakaviana ianao dia aza hadino ny toerana tonga lafatra 4 hitetezana ankizy any Eropa.
2 Misitrika ao amin'ny Algarve (Portugal)
3 Siampark Adeje (Espana)
4 Playmobil Park (Alemana)
Ny nofinofin'ny ankizy tsirairay dia ny hitsidika an'i Disneyland Paris indray andro any ary hihaona amin'ny tarehin-tsarimihetsika tiany indrindra. Ny fanaovana azy amin'ny volana septambra, ny vanim-potoana ambany, dia hamela antsika hamandrika amin'ny vidiny mora kokoa ary raha manao izany amin'ny alàlan'ny Internet isika dia afaka mamonjy euro vitsivitsy ihany koa ny ray aman-dreny, satria eo amin'ny biraon'ny boaty dia mety lafo kokoa izany. Na izany aza, ny fitsidihana ny valan-javaboary lehibe indrindra any Eropa mandritra ny daty manokana toy ny Krismasy dia mety ho zavatra tsy hay hadinoina.
Raha vao any Disneyland Paris dia misy zavatra betsaka tokony hatao: miakatra amin'ireo manintona mahavariana, maka sary miaraka amin'i Mickey, Snow White na ny Mpanjakavavy Elsa, mandiniha ny labyrintan'i Alice tsara tarehy ary mankafy ny iray amin'ireo seho manaitra azy amin'ny alina. Betsaka ny zavatra hita fa ny Fastpass dia ho mpiara-miasa akaiky indrindra amin'ny fianakaviana. Ity rafitra ity izay misy ho an'ny fisarihana 3 sy 9 dia mamela ny fidirana haingana any amin'ireo manintona an'i Disneyland Paris.
Na dia ny hahalala an'i Disneyland Paris aza dia azonao atao ny manararaotra ilay dia mba hampisehoana amin'ny ankizy ny zava-nisongadinan'ny tanànan'ny hazavana: ny Tilikambo Eiffel malaza, ny Katedraly Notre Dame, ny Arc de Triomphe na ny Palace of Versailles. Mahaliana anao ireo tantara ao ambadik'ireo tsangambato tsirairay ireo.
Misitrika ao amin'ny Algarve (Portugal)
Hatramin'ny nisokafany, Zoomarine dia nifantoka tamin'ny fitehirizana ny fiainana any amin'ny ranomasina, ny karazany ary ny toeram-ponenany. Ny fandroana miaraka amin'ireo biby tia namana ireo dia ho traikefa iray izay tsy hohadinoin'ny ankizy mihitsy fa manana manintona sy seho hafa miaraka amin'ny vorona sy mandady izy izay tena mahaliana ihany koa.
Ankafizin'ny ray aman-dreny amin'ny maha zanaka azy eto amin'ity toerana ity sy eny amoron-dranomasina mahafinaritra an'i Algarve, malaza amin'ny rano madio sy manjelanjelatra, ny tontolo mahafinaritra ary ny Surf mihitsy aza. Ny torapasika antsoina hoe Costa Vicentina dia mety amin'ny fampiharana an'ity fanatanjahantena ity.
Sary | Blog Siam Park
Siampark Adeje (Espana)
Araka ny voalazan'i Tripadvadora, ny valan-javaboary Siam Park any Adeje (Tenerife) dia nanangana ny tenany ho tsara indrindra manerantany. Izy io dia manana toerana manintona maro be natao ho an'ny fianakaviana sy ho an'ireo mitady fialan-tsasatra na fihetsem-po mahery.
Ny malaza indrindra dia ny Tower of Power, fivezivezena 28 metatra avo misy 76 metatra ny halavany izay mety hahatratra 80 km / ora. Gaga ihany ny farany satria ny diany dia miafara amin'ny tionelina iray voahodidin'ny aquarium goavambe izay ahitanao antsantsa, manta ary karazana trondro hafa.
Ho fanampin'izay, ny Siam Park no manana onja artifisialy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao: onja 3 metatra atahoran'ny olona sahisahy indrindranoho izany ny fahitana azy tapaka eo am-pototry ny fonao fotsy eo amoron'ny morony, fomba tsara hanombohana fivezivezena na fialamboly mitsambikimbikina.
Ny iray amin'ireo lafiny mahaliana indrindra ao amin'ny Park Siam dia ny fananany ny tanàna Thai lehibe indrindra any ivelan'i Azia, izay namboarin'ireo Thai. Mampino marina? Ary inona no fomba tsara kokoa haka fotoana fialan-tsasatra toy izay hankafy ny fomba fijery hafahafa amin'ilay zaridaina amin'ny fitsidihana ny Mai Thai River, renirano tropikaly izay mamakivaky ity zaridaina lohahevitra ity miaraka amina faritra miadana sy haingana manome anao ny fomba fijery tsara indrindra momba azy.
Sary | Continentaleurope
Playmobil Park (Alemana)
Raha miresaka momba ny dia lavitra miaraka amin'ny ankizy any Eropa ianao, raha eo amin'ny radaranao i Alemana, dia azo antoka fa ho tian'izy ireo ny mitsidika ny Playmobil Park, valan-javaboary misy lohahevitra napetraka ao amin'ireo kilalao malaza efa nitomboan'ny taranaka maro.
Any Zirndorf no misy ilay zaridaina, kilometatra vitsivitsy miala an'i Nuremberg. Tsy valan-javaboary fialamboly izy io fa zaridaina lohahevitra voaravaka estetika paymobil ary ny faritra tsirairay dia playet mitovy habe amin'ny fiainana. Ao amin'ny Park Playmobil dia misy slide, faritra misy rano, labyrint, faritra mananika, fihazana harena (amin'ny fasika sy anaty rano), sns. Izay rehetra ilainao mba hananan'ny ankizy fotoana mahafinaritra!
Ny zavatra akaiky indrindra manintona ny traktera dia ny traktera (avy amin'ny 3 taona), sambo kely amin'ny farihy iray ao amin'ny faritr'i Hadas (avy amin'ny 4 taona) ary fiara pedal any amin'ny faritry ny paositry ny polisy (avy amin'ny 6 taona).
Toy ny valan-javaboary misy lohahevitra, ny Playmobil Park dia manana fivarotana fahatsiarovana ihany koa ahafahanao mividy fanomezana ho an'ny ankizy mba tsy hanadinoany ny fijanonany amin'ity toerana ity. Betsaka ny tolotra mahaliana amin'ny playets mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Fitsangatsanganana miaraka amin'ny ankizy any Eropa